China, Yakasarudzika, Yemhando Pancake tutu siketi, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Shenzhen Ritter Star Technology Co LTD
Imba > Tutu > Munhu mukuru tutu > Pancake tutu siketi
Pancake tutu siketi
Iyo dhizaini yekufemerwa kwePancake tutu siketi kunobva â € iaCamelliaâ € .Iine: Pfuma rhinestones! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
Kutaurwa kwePancake tutu siketi
Ruvara rweTutu rwese runotora - dhinki dhizaini, inoenderana nemabatiro eCamelliaâ €.
Iko kushongedzwa kwemuviri nesiketi zvinoreva chitarisiko uye ruvara rweâ € œCamelliaâ €, ichiwedzera kumwe kufunga kwekuita ikozvino kuitika.
Zvakanakira Pancake tutu siketi
1. Zvishongedzo zvese nematombo echipenga zvakagurwa nemaoko uye zvakarongedzwa, chidimbu chimwe nechimwe chakasarudzika
2. Yakazara siketi inogadziriswa zvinoenderana nehukuru hwaTutu kuve nechokwadi chekubatana kwekuzara uye huremu
Maparamende ePancake tutu siketi
Kugadziriswa kwePancake tutu siketi
Mushure mekutengesa sevhisi yePancake tutu siketi
Mushure mekuchigamuchira, kana paine chero chigadzirwa chemhando yepamusoro, tichazotaurirana newe zvinoenderana nekukura kwedambudziko, kudzoreredza kuzere kana muripo wakasarudzika
Q&A yePancake tutu siketi
Hot Tags: Pancake tutu siketi, China, Yakasarudzika, Hunhu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Wudongfang Tsika Kutaurirana Ation Co., Ltd.
Mukuru Ballerina Koshitomu
nyanzvi ballet tutus iri kutengeswa
nyanzvi ballet tutus yekutenga